विश्वास गर्नुहोस् कि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। - अज्ञात - उद्धरण प्याडिया
विश्वास गर्नुहोस् केहि असम्भव छैन जीवन मा। हो, आज मानिस सफल भएका व्यक्तिले आफ्नो हारका लागि गन्तव्य स्थान प्राप्त गरेका छन् किनभने उनीहरूले हार मानेनन्। उनीहरूको क्षमतामा पूर्ण विश्वास थियो र यो प्राप्त गर्न उनीहरू कडा परिश्रम गरिरहेका थिए।
जान्नुहोस् कि सफलता कहिल्यै कसैलाई पनि रातदिन आउँदैन। सफलताको गवाही दिन यसले पसिना र रगत लिन्छ, र त्यो पालन गर्ने व्यक्तिले कुनै दिन सफलताको फलको स्वाद लिन निश्चित गर्दछ।
तपाईंको जीवनमा सफल हुनको लागि, तपाईं जुन क्षेत्र वा क्षेत्र हुनुभएको कुनै कुरा छैन, तपाईंले यो तथ्यमा विश्वास गर्नै पर्छ कि 'केही पनि असम्भव छैन!'
केवल जब तपाई यो विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो सबै तपाईको हातमा छ कि तपाई आफैले आफ्नो सम्भावनालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, र त्यसले अन्ततः चाँडै वा पछि तपाईलाई सफलताको शिखरमा पुर्‍याउँछ। तपाईं आज नै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, तर यदि तपाईंले पुग्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं यसको लागि हिंड्नुपर्नेछ।
कहिलेकाँही हामी सफलतामा पुग्नको लागि आउने अवरोधहरू देखेर हिंड्न डराउँछौं। तपाईं त्यसो गर्ने हुनुहुन्न!
जान्नुहोस् कि सफलताको लागि बाटो कहिल्यै पर्याप्त सजिलो हुनेछैन! तपाईंले सबै कठिनाइहरू सहनुपर्नेछ, र जब तपाईं ती सबै अवरोधहरू पार गर्नुहुन्छ केवल तपाईं आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्षम हुनुहुनेछ।
प्राय: मानिसहरू यी अवरोधहरू पार गर्न थकित हुन्छन्, र जब उनीहरू असफलता स्वीकार्छन्। जान्नुहोस् कि सफलता बहु पटक असफलताको बारेमा होइन; यो सबै जब तपाईं उठ्न अस्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंले धेरै कठिनाइहरू सहनु पर्दछ, तर तपाईंभित्र स्थिर रहनु पर्छ! ती सबै अवरोधहरू पार गर्दै जानुहोस्, र दृढ संकल्प गर्नुहोस् र तपाईंको महत्वाकांक्षातिर केन्द्रित हुनुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो काम तिर समर्पित हुनुहुन्छ, केहि पनि तपाईंलाई हराउन सक्दैन।
यो बुझ्नु आवश्यक छ कि यस संसारमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, र आज सफल भएका व्यक्तिहरूले यी वास्तविकताहरू सफल हुनु अघि यी सबै चरणहरू पार गरे।
तसर्थ, तपाईं कुनै पनि मौका द्वारा अपवाद छैन। तपाईलाई सबै कुरा बुझ्नु आवश्यक छ कि यी हरेक अवरोधहरू तपाइँलाई पाठ सिकाउन र तपाइँलाई केहि वा अन्य अनुभवहरू दिनको लागि हो।
साथमा हिंडिरहनुहोस्, र असफलतालाई कहिल्यै स्वीकार नगर्नुहोस्। जुन दिन तपाईं यो तथ्यलाई अंगाल्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईं पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ।
केवल कुनै पनि प्रकारको व्याकुलतालाई ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति नदिनुहोस्, र जब तपाईं धेरै कडा परिश्रम गरिरहनुहोस्, तपाईं 'सफलता' पूरा गर्न बाध्य छन्। यसले समय लिन सक्दछ, तर तपाईंले हरेस खानु हुँदैन। तपाईंको धैर्य धारण गर्नुहोस् र चीजहरू तिनीहरूको आफैंमा सबै आफैं पतन हुनेछ।
भगवान उद्धरणहरूमा विश्वास गर्नुहोस्
चमत्कार उद्धरणहरूमा विश्वास गर्नुहोस्
आफैलाई उद्धरणहरूमा विश्वास गर्नुहोस्
Quotes छोटा गर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस्
महान छोटो उद्धरण
केहि सम्भव छैन उद्धरण
शक्तिशाली छोटो उद्धरण
बिहीबार प्रेरणादायक उद्धरण
बिहीबार प्रेरणा उद्धरण
सबै कुरा तपाईलाई सही समयमा आउँदछ। धैर्य गर्नुहोस् र प्रक्रियामा विश्वास गर्नुहोस्। - अज्ञात
धैर्य कुञ्जी हो। सफलता त्यस्तो चीज होइन जुन केवल एक दिन तपाईंको ढोकामा टेलिपोर्ट हुनेछ। केहि छैन ...
कहिलेकाँही जीवनले तपाईलाई के दिन्छ त्यो दिदैन, किन कि तपाई यसको योग्य हुनुहुन्न, तर तपाई अधिक योग्यको हुनुभएकोले। - अज्ञात
कहिलेकाँही जीवनले तपाईलाई आफूले चाहेको कुरा दिदैन, किन कि तपाई यसको योग्य हुनुहुन्न, तर किनभने तपाई लायक हुनुहुन्छ ...
प्रत्येक दिन आभारी हृदयले शुरू गर्नुहोस्। - अज्ञात
प्रत्येक दिन आभारी हृदयले शुरू गर्नुहोस्। यो बुझ्नको लागि प्रत्येक र प्रत्येक महत्त्वपूर्ण छ ...
जब तपाईं जानुहुन्छ, तपाईं राम्रो चीजहरूको लागि आफ्नो जीवनमा प्रवेश गर्न ठाउँ सिर्जना गर्नुहुन्छ। - अज्ञात
जब तपाईं जानुहुन्छ, तपाईं राम्रो चीजहरूको लागि आफ्नो जीवनमा प्रवेश गर्न ठाउँ सिर्जना गर्नुहुन्छ। - अज्ञात सम्बन्धित ...